I-15% Sebenzisa iMithombo Yezokuxhumana Ukuthola Amabhizinisi Endawo | Martech Zone
NgoMsombuluko, Ephreli 29, 2013 NgoMsombuluko, Ephreli 29, 2013 Douglas Karr
Ubuwazi ukuthi amaphesenti ayi-15 abathengi asebenzisa izingosi zokuxhumana nabantu ukufuna amabhizinisi endawo? Izinkampani eziningi kakhulu zilahlekelwa yithuba lokuthuthukisa umphakathi wazo ngaphakathi kwezokuxhumana, zisiza ukukhulisa igunya labo nokuqwashisa phakathi kwamanethiwekhi abantu abanentshisekelo kakhulu kwimikhiqizo yabo kanye nezinsizakalo. Ngisho nalabo abalibonayo leli thuba kusenzima ukulikhipha, noma kunjalo.
Sixoxile Isethi yamathuluzi wokuzenzekelayo wokuthengisa waseBalihoo kubhulogi phambilini. Basanda kukhipha le infographic nge amaqiniso ezokuxhumana nabantu wonke amabhizinisi kufanele azi.
Tags: Balihooezenzekelayo zokumaketha zasendaweniukusesha kwendawoukuzenzakalela kokuthengisa kwasendaweni kwasendaweniamaqiniso ezokuxhumana nabantu
Ngo-Apr 30, i-2013 ku-10: 30 AM
Lesi sihloko se-infographic asinalo igama elithi “Kuphela”. Ngemuva kwakho konke ngokuqhathanisa u-11% wabathengi basasebenzisa amakhasi aphuzi aprintiwe. Imithombo yezokuxhumana ayisona isizinda sosesho lwasendaweni (okungenani, hhayi okwamanje).